Wararka - Goobta gadaasheeda: Tartanka asaasiga ah ee Ashine - kooxda adeegga macaamiisha
Bishii Diseembar 22-keedii 2020, Kooxda Adeegga Macmiilka ee Ashine oo soo koobtay dhammaadka sannadka iyo warbixinta qorshaha shaqo ee 2021 ayaa ku bilaabatay waqtigii loogu talagalay.
Cudurka faafa ee ku faafay 2020 wuxuu ka dhigay shirkad kasta inay la kulanto caqabado aad u daran, oo xitaa ka sii adag sidii ay u adkaan lahayd awoodda shirkadda, oo aysan ku jirin oo keliya awood adag, laakiin sidoo kale awood jilicsan. Kooxda adeegga macmiilku waxay shaqo badan u qabteen macaamiisha daaha gadaashiisa, oo ay ka mid yihiin:
Qofka macmiilka ah ayaa mar amray in alaab laga soo iibiyo alaab -qeybiye gudaha ah, laakiin ma uusan helin alaabtii bixinta kadib. Xitaa haddii la khiyaameeyay oo ay ka digtoon yihiin soo -saarayaasha gudaha, macaamiisha ayaa weli kalsooni aan shuruud lahayn ku qaba Ashine waxayna nagu aaminaan inaan gacan ka geysanno iibsiga alaabta gudaha.
02 Soo noqosho la'aan
Markay macaamiishu si degdeg ah ugu baahan yihiin badeecad gaar ah, marka weelka maraakiibta uu gabaabsi yahay oo boosku uusan ballansanayn, adeegga macmiilka Ashine ma xisaabayo magdhawga, wuxuuna sameeyaa wax kasta oo suurtogal ah si uu u helo shixnadaha macaamiisha oo uu u xaliyo baahidooda degdegga ah; daryeel daacad ah oo loogu talagalay macaamiisha inta lagu jiro cudurka, oo lacag la'aan ah Ku deeq qalabka ka hortagga cudurrada.
03 Wadnaha wadnaha
Waxaa saameeyay cudurka faafa, sicirrada xamuulka badda ayaa aad kor ugu kacay. Iyada oo ku saleysan mabda'a ah in laga fiirsado aragtida macaamilka, adeegga macaamiisha Ashine wuxuu si iskiis ah u qabtay shaqo dheeri ah, isagoo isbarbar dhigaya qiimaha iyo waqtiga waqtiga saadka badan iyo arrimo kale oo muhiim ah, iyo helitaanka habka ugu wax ku oolka badan uguna dhaqsaha badan macaamiisha xamuulka.
04 Caadi ka dhig tababarka
Intii lagu jiray cudurka faafa, waaxda adeegga macmiilku waxay sii waday inay kor u qaaddo tababbarka wax -soo -saarka warshadaha iyo kooxaha xakamaynta tayada si loo sii wanaajiyo wacyiga tayada leh ee dhammaan shaqaalaha iyo kor -u -qaadista tartanka shirkadda.
05 Adeeg qoto dheer
Qorshaha mustaqbalka ee waaxda adeegga macmiilku waa inuu had iyo jeer u adeego macaamiisha si qoto dheer, u daweeyo faah -faahin kasta si dhab ah, una adeegsadaa ficillada si loo abuuro dareen aan la beddeli karin oo ku -tiirsanaanta iyo kalsoonida macmiilka.
2020 waxaa loo qoondeeyay inuu noqdo sanad aan caadi ahayn. Mid kasta oo yar laakiin weyn oo naga mid ah wuxuu la kulmayaa taariikh iyo marqaati taariikh. Sannadkan adag iyo kan gaarka ah, shaqaale kasta oo ka tirsan Ashine wuxuu u hoggaansamayey ruuxa beerista degdegga ah ee badeecadaha, hagaajinta joogtada ah ee tayada alaabta iyo adeegga macmiilka ee qoto dheer. Waxaa kaloo sharaf weyn noo ah inaan la shaqeyno macmiil kasta si aan u qaadanno sannadkan gaarka ah oo macnaha leh. Hadda oo dabayshii bari dhalaashay iyo cayayaankii qaniinay ay bilaabeen inay gariiraan, waxaan aaminsanahay in mustaqbalka Ashine uu sii wadi doono inuu u hoggaansamo dareenka sare ee mas'uuliyadda iyo xirfadda Ashine, oo uu hore u sii socdo, Ashine ha noqoto astaan ​​tayo sare leh, gebi ahaanba beddelo sawirka tayada hooseeya ee laga sameeyay Shiinaha, oo noqo alaab-qeybiyeha ugu ixtiraamka badan adduunka ee shiididda dhulka iyo qalajinta aaladaha dheemanka!
Kabaha Shiida Dheemanka, Kabaha Shiidi PCD, Suumanka Nadiifinta La -taaban karo, Kabaha shiidi la taaban karo, Trapezoids Kabaha Shiidi Dheemanka, Birta Ku Xidhan Dheemannada Shiidi Kara,